Dhageyso: Wasiir Puntland Ka Tirsan Oo Raalli Gelin Laga Dalbaday – Bandhiga
Dhageyso: Wasiir Puntland Ka Tirsan Oo Raalli Gelin Laga Dalbaday
Guddoomiyaha gobolka Bari, taliyaha ciidanka booliiska Puntland, taliyaha ciidanka badda Puntland iyo Sarkaal ka socday ciidamada PSF ayaa lagaga dalbaday wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Siciid Maxamed Raage inuu raaligalin ka bixiyo hadal uu warbaahinta ka tabiyay oo uu ku sheegay inaan wada shaqayn ka dhaxayn ciidamada kala duwan ee Puntland.
Taliyaha ciidanka badda maamulka Puntland Sareeye Gaas Cabdirisaaq Diiriye Faarax iyo G/dhexe Cabdiqaadir Cali Xirsi oo ka socday Ciidamada amniga Puntland ee PSF ayaa hadalka wasiir Siciid Maxamed Raage ku tilmaamay mid xaqiiqda ka fog oo uga been abuurtay ciidamada iyo saraakiishooda.
Sareeye Gaas Cabdirisaaq Diiriye Faarax ayaa sheegay in wasiirku hadalka uu sheegay uusan waxba ka jirin.
Waxaa uu intaas ku daray in wada shaqeyn fiican ay leeyihiin ciidamada kale duwan ee Puntland.
Hadalka madaxda amniga Puntland ayaa ku soo aadaya iyadoo Wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Siciid Maxamed Raage uu sheegay laba maalin ka hor in nabadgalyo darrada ka jirta magaalooyin ka mid ah maamulkaasi sida Boosaaso ay sabab u tahay wada shaqeyn la’aan ka dhex jirta laamaha kale duwan ee ciidamada.